N-GUN JA WA: Rule Of Law (တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး)
ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်တိုင်းပြည်၊ မည်သည့်လူမျိ်ုး၊ မည်သည့်ဘာသာမဆို အေးချမ်းစွာနေထိုင် ပြီး ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးကို ရှာဖွေ စားသောက်ကာ နေထိုင်သော လူကောင်းများရှိသကဲ့သို့ ပြစ်မှုများကို ကျူးလွန်သော လူဆိုးသူခိုးများလည်း ရှိပါသည်။ထိုလူဆိုး သူခိုး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ များကို သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းပြုလုပ်ရပါသည်။ ထိုပြစ်ဒဏ် များထဲတွင် သေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ် စသဖြင့် ကျူးလွန်သော ပစ်မှုကိုလိုက်ပြီး အပြစ်ပေး အရေးယူရပါသည်။ သို့မှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု (Rule of Law) ကို ဖြစ်စေပါသည်။
မည်သည့်ဘာသာဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်(သို့)လူတစ်စုက ပြစ်မှုများ (မုဒိန်းမှု၊ ခိုးမှု၊ ရိုက်နှက်မှု) စသည့် တို့ကျူးလွန်သဖြင့် ထိုသူတို့နှင့်ဘာသာတူသည့် သူများ၏ အသက်၊အိုးအိမ်၊စည်းစိမ်၊ဘာသာသာသနာ အဆောက်အဦးတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းမပြု လုပ်ရပါ။ ထို သို့ ပြုလုပ်သူများသည်ပင်လျှင် ပြစ်မှုများကျူးလွန်သူများဖြစ်ပြီး ဥပဒေပါအတိုင်း အရေယူဆောင်ရွက်မှသာ တိုင်းပြည်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု (Rule of Law) ဖြစ်ပေါ်လာမည်သာဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ နိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီ ခေတ်သို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။(ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ အခွင့်အရေးရှိသလို တာဝန်များလည်းရှိသည်။) မည်သည့် ဥပဒေတွင်ဖြစ်စေ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန် ၂ ရပ် ပူးတွဲ တည်ရှိနေပါသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်း အခွင့်အရေးရှိသလို လိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများလည်းရှိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (င) တွင် “နိုင်ငံတော်သည် …. နိုင်ငံတော်၌ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း နှင့် ညီမျှခြင်းတည်းဟူသော လောကပါလတရားများ ပိုမိုထွန်းကားရေး…..တို့ ကို အစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည် ” ဟု ပြဌာန်း ထားပါသည်။
၄င်း ပြင် ပုဒ်မ ၃၄ တွင် “ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည့်သူ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ အခြားပြဌာန်း ချက်တို့ နှင့်သော်လည်းကောင်း မဆန့် ကျင်လျှင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည်ဘာသာ သာသနာရေးတွင် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ဆောက်တည်နိုင်သော အခွင့်အရေးတို့ ကို အညီအမျှရရှိစေရမည်။”
ပုဒ်မ ၃၆ဝ (က) တွင် “ဘာသာသာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ဆောက်တည်မှု သည်စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အခြားလောကီရေးရာ ဆောင်ရွကမှုတစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်နေပါက ပုဒ်မ ၃၄ ပါ ဘာသာ သာသနာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်များတွင် မပါဝင်စေရ၊”
ပုဒ်မ ၃၆ဝ (ခ)တွင် “ ထို့ သို့ ဘာသာသာသနာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးများကို ပေးထားသော်လည်း အများပြည်သူအကျိုးကိစ္စနှင့် ပြုပြင်ရေးကိစ္စတို့ အတွက် နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြု ခြင်း ကို မတားမြစ်ရ။”
ပုဒ်မ ၃၆၁ တွင် “ နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကို နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်ထူးဝိသေသနနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဘာသာသာသနာဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်။”
ပုဒ်မ ၃၆၂ တွင် “ နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန် ဘာသာသာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သောဘာသာတို့ ကို ဤဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သောနေ့ ဠ် နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြ သော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။”
ပုဒ်မ ၃၆၃ တွင် “နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြု ထားသော ဘာသာသာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။”
ပုဒ်မ ၃၆၄ “နိုင်ငံရေးကိစ္စ အလို့ ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့ ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ် ဂိုဏ်း နှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း. စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတစ်မျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့ မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန်အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့် ကျင် သည်။ထို အပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြ ဋ္ဌာန်း နိုင်သည်။” ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံသားများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ခံစားပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်နှင့် တားမြစ်ချက်များ ထိရောက်ခိုင်မာပြည်စုံစေရန် လိုအပ်သောဥပဒေ ပြ ဌာန်း ရမည်ဟု ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁(ဃ) တွင် ပြဌာန်းထားသည့်အပြင် ပုဒ်မ ၃၆၄ ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ လိုအပ်နေသော “ဘာသာသာသနာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော ဥပဒေ” အား ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်မှ့ အမြန်ဆုံး ပြဌာန်းပေးပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ( ရာဇသတ်ကြီး Penal Code) အခန်း ၁၅ – ပုဒ်မ ၂၉၅ ၊ ၂၉၅ (က)၊ ပုဒ်မ ၂၉၆ ၊ ပုဒ်မ ၂၉၇၊ ပုဒ်မ ၂၉၈ တို့ တွင် ဘာသာသာသနာနှင့် ဆိုင် သော ပြစ်မှုများကို ပြစ်ဒဏ်များနှင့်တကွ ပြ ဌာန်း ထားပါ သည်။ ၄င်း ပုဒ်မ များ အပြည့်အစုံ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၉၅ အရ ။ ။- လူတစားကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသာသနာကို စော်ကားရန် အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသော နေရာကိုသော်၎င်း၊ အထွဋ်အမြတ်ထားသော အရာဝတ္ထုကိုသော်၎င်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းသည်၊ သို့ တည်းမဟုတ် ပျက်စီးနစ်နာစေခြင်းသည်၊သို့ တည်းမဟုတ် ယုတ်ညံ့စေခြင်းသည်၊ ထို ဘာသာသာသနာကို စော်ကားသည်ဟု လူတစားက ယူဆတန်ရာသည်ကို သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို၊ ထိုလူတစားက ဘာသာသာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြု သော နေရာကိုသော်၎င်း၊ အထွဋ်အမြတ်ထားသောအရာဝတ္ထု ကို သော်၎င်း၊ ဖျက်ဆီးလျှင်၊ သို့ တည်းမဟုတ် ပျက်စီးနစ်နာစေ လျှင်၊သို့ တည်းမဟုတ် ယုတ်ညံ့စေလျှင်၊ ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၉၅ (က) ။ ။ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်တွင် နေထိုင်သော လူတစား၏ဘာသာရေးစိတ် ကို နာကြည်းစေရန် တမင်မသမာသော အကြံဖြင့် မည်သူမဆို၊ စကားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထင်ရှားသောပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ထို လူတစားကိုးကွယ်သည့် ဘာသာသာသနာကို သော်၎င်း၊ ဘာသာသာသနာရေးယုံကြညမှုကိုသော်၎င်း၊ စော်ကားလျှင်၊သို့ တည်းမဟုတ် စော်ကားရန်အားထုတ်လျှင်၊ ထိုသုကို နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၉၆။ ။ ဥပဒေနှင့်အညီ ဘာသာသာသနာရေးဆိုင်၇ာ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းပြုနေသော၊ သို့ တည်းမဟုတ် ဘာသာသာသနာရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကို ကျင်းပနေသော အစုအဝေး တခုခုအား မည်သူမဆို၊ မိမိအလိုအလျောက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလျှင်၊ ထိုသူကို တနှစ်ထိထောင်ဒဏ်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၉၇။ ။ တဦးတယောက်သောသူ၏ စိတ်ကိုနာစေရန် အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ၊တဦးတယောက် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသာသနာကို စော်ကားရန် အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ တဦး တယောက်သောသူ၏ စိတ်ကို နာစေတန်ရာသည်ကို၊ သို့ တည်းမဟုတ် တဦးတယောက်သောသူ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာသာသနာကို စော်ကားတန်ရာသည်ကို သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို၊ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသောနေရာ၌ သော်၎င်း၊ သင်္ချိုင်း၌ သော်၎င်း၊ မသာအခမ်းအနား ဆောင်ရွက်ရန်သီးသန့် ထားသည့် နေရာ၌သော်၎င်း၊ လူသေအလောင်းထားရန်သီးသန့် နေရာ၌သော်၎င်း ကျူးကျော်စော်ကားလျှင်၊ သို့ တည်းမဟုတ် လူသေအလောင်းကို မဖွယ်မရာပြုလျှင်၊ သို့ တည်းမဟုတ် မသာအခမ်းအနားကျင်းပဆောင်ရွက်ရန် စုဝေနေသူတို့ ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလျှင်၊ ထိုသူကို တနှစ်ထိထောင်ဒဏ်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
အခြေခံဥပဒေ ၂၁ (က) ။နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဤဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေး တို့ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၂၁(ဂ) ။ ပြည်သူတို့ ၏အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ သည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန် ဖြစ်သည်။
ဘာသာသာသနာတစ် ရပ်ရပ်အား ထိခိုက်ပုတ်ခတ်စော်ကားသော ဟောပြောမှု ထိုဟောပြောသော တရားခွေ VCD / DVD ခွေများကို တရားမဝင် လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချဖြန့် ဖြူး နေမှုများသည် နိုင်ငံတော်အားဆူ ပူအုံကြွမှုဖြစ်ပေါ်စေရန် အဓိကလှုံ ဆော်ဆောင်ရွက်မှု အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို ဆောင်ရွက်ဖြန့် ဖြူး ချက် များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ ( ပြည်ထဲရေး နှင့် ဘာသာရေးဝန်ကြီး ဌာန ရဲ အရာရှိများ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ တရားရုံးများ)နှင့် တကွ တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးမှ ဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ဟန့် တား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမှသာလျှင် နိုင်ငံသားတို့ ၏ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊ ဘာသာသာသနာ အ ဆောက်အဦးတို့ အား ကာကွယ်စောင့် ရှောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာအလယ်တွင် လူ့ အခွင့်အရေး ကို လေးစားလိုက်နာသော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သိက္ခာရှိစွာ ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by N-gun Ja Wa at 7:46 AM